FIREWALLS HO AN'NY ANDROID - ANDROID - 2019
Firewall apps amin'ny Android
Ny fitaovana amin'ny Android ary ny ankamaroan'ny fampiharana ho azy ireo dia mifantoka amin'ny fampiasana ny Internet. Etsy andaniny, manome fahafahana be dia be izy io, amin'ny lafiny iray hafa - vulnerabilities, manomboka amin'ny tetezan'ny fifamoivoizana ary mifarana amin'ny otrikaretina VIH. Mba hiarovana amin'ny faharoa, tokony hifidy antivirus ianao, ary ny programa firewall dia hanampy amin'ny famahana ny olana voalohany.
Firewall tsy misy Root
Firaketana firehetana avo lenta, izay tsy mitaky ny zon'ny fototeny, fa koa ny fahazoan-dàlana fanampiny toy ny fidirana amin'ny rafitra fisoratana na zo hanao antso. Ny mpandrindra dia nahavita izany tamin'ny fampiasana ny fifandraisana VPN.
Ny fifamoivoizanao dia alaina amin'ny alàlan'ny servisy fampiharana, ary hampahafantarina anao raha misy asa mampiahiahy na mihodinkodina. Ankoatr'izay, azonao atao ny mandrara ny fampiharana manokana amin'ny fidirana amin'ny aterineto na amin'ny adiresy IP manokana (noho ny safidy farany, ny fampiharana afaka manolo ny fanakanana adiresy), ary ho an'ny fifandraisana Wi-Fi sy ho an'ny Internet. Ny fananganana parallèle maneran-tany koa dia tohanana. Ny fampiharana dia maimaim-poana, tsy misy dokam-barotra na amin'ny teny Rosiana. Tsy misy hadisoana mazava (afa-tsy ny fifandraisana mety ho an'ny VPN).
Download Firewall Tsy Misy Root
Iray amin'ireo firewall avo indrindra indrindra ho an'ny Android. Ny fampiharana dia ahafahanao manadio tsara ny tranokala Linux-iptables natsangana, hampifanaraka ny fanakanana tranokala na maneran-tany ny fidirana aterineto ho an'ny mpampiasa azy.
Ny endriky ny fandaharana dia ny fanasongadinana ny fampiharana ny rafitra ao amin'ny lisitra (mba hisorohana ny olana, ny fitaovan'ny rafitra dia tsy tokony ho voarara tsy handeha amin'ny aterineto), ny fampidirana ny fanovana avy amin'ny fitaovana hafa, ary ny fitazonana tahirin-tsipiriany amin'ny antsipiriany. Ankoatra izany, io firewall io dia azo arovana amin'ny fidirana na famafana tsy ilaina: ny voalohany dia atao amin'ny tenimiafina na code code, ary ny faharoa amin'ny fampidirana fampiharana amin'ny mpitantana ny fitaovana. Mazava ho azy fa misy fifidianana fifandraisana mihidy. Ny tsy fahampiana dia ny sasany amin'ireo endri-javatra azo ampiasaina amin'ny mpampiasa manana zo fototra, ary koa ho an'ireo izay nividy ny dikan-teny feno.
Download AFWall +
Misy firewall hafa tsy mila Root noho ny asa feno. Izy koa dia mifototra amin'ny fanivanana ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny fifandraisana VPN. Izy io dia manana endriny mazava sy manara-maso ny fiarovana.
Avy amin'ny safidy azo atao dia tokony handinika tsara ny fanohanan'ny mpampiasa marobe, hampifanaraka ny fanakanana ny fampiharana manokana na adiresy ary hiasa amin'ny IPv4 sy IPv6. Mariho koa ny fisian'ny fangatahana fifandraisana amin'ny fifandraisana sy ny fitaterana fifamoivoizana. Ny endri-javatra mahaliana dia ny takelaka haingam-pandeha amin'ny Internet hita amin'ny toeran'ny sata. Mampalahelo fa ity sy ny endri-tsoratra maromaro hafa dia azo alaina amin'ny volavola karama. Ankoatra izany, ao amin'ny vohikala maimaimpoana an'ny NetGuard dia misy dokam-barotra.
Mobiwol: Firewall tsy misy fotony
Ny firewall izay tsy mitovy amin'ny mpifaninana amin'ny endrika interface sy ny endri-tsarimihetsika kokoa. Ny singa fototra amin'ny fandaharana dia ny fifandraisana VPN diso: araka ny hevitr'ireo mpandrindra, dia mamadika ny faneriterena amin'ny fiasa amin'ny fifamoivoizana tsy misy ifandraisany amin'ny zo fototra.
Noho io sakana io, dia manatanteraka ny fifehezana tanteraka amin'ny fampifandraisana ny fampiharana rehetra napetraka ao amin'ny fitaovana i Mobivol: Afaka mametra ny fampiasana Wi-Fi sy ny finday amin'ny finday, mamorona lisitra fotsy, ahitana ny lisitry ny hetsika an-tsipirihany sy ny habetsahan'ny Internet megabytes ampiasaina amin'ny fampiharana. Amin'ny endri-javatra fanampiny, dia manamarika ny fisafidianana ny fandaharan'asan'ny programa ao amin'ny lisitra, ny fampisehoana rindrambaiko mandeha eny an-dàlambe, ary ny fomba fijerin'ny port izay ahafahan'ny rindrambaiko manokana mifandray amin'ny tambajotra. Ny fahafahana rehetra dia afaka maimaim-poana, nefa misy ny dokam-barotra ary tsy misy fiteny Rosiana.
Download Mobiwol: Firewall tsy misy faka
Ny solontenan'ny firewall hafa izay afaka miasa tsy misy fotony. Tahaka ny solontenan'ny solontenan'ity karazana fampiharana ity, dia miasa izy io noho ny VPN. Ny fampiharana dia afaka mandinika ny fihenan'ny fifamoivoizana amin'ny programa ary mamoaka tatitra amin'ny antsipiriany.
Afaka maneho tantara momba ny herin'aratra ihany koa izy mandritra ny ora iray, isan'andro na isan-kerinandro. Ireo asa mahazatra amin'ireo fampiharana etsy ambony ireo dia mazava ho azy fa misy koa. Anisan'ireo karazana endri-tsoratry ny NoRoot Data Firewall izahay, manamarika ny fifandraisana fampitomboan'ny fifandraisana: fameperana voafetra ny fidirana amin'ny aterineto amin'ny fampiharana, fametrahana ny fahazoan-dàlana ho an'ny sehatra, fanivanana domains sy adiresy IP, fametrahana ny DNS manokana, ary koa ny tsotra indrindra amin'ny packet sniffer. Ny fahafahana miasa dia afaka maimaim-poana, tsy misy dokam-barotra, fa misy olona mety ho mailo amin'ny filàna fampiasana VPN.
Download ny Firewall Data NoRoot
Ny lanjan'ny fanapahan-kevitra "napetraka, navadika, adino." Angamba io fampiharana io dia azo antsoina hoe sehatra tsotra indrindra amin'ny alamaina voalaza etsy ambony - minimalism amin'ny endrika sy ny sehatra.
Ny safidin-dresaky ny lehilahy gentleman dia ahitana sehatra firehan-kevitra mahazatra, ny fampidirana / fanilihana ny fampiharana manokana avy amin'ny lisitry ny voasakana, ny antontan'isa momba ny fampiasana programa amin'ny Internet, fantsona fanovana ary ny tranokala fisehoan-javatra. Mazava ho azy, ny fampisehoana ny fampiharana dia omena amin'ny alalan'ny fifandraisana VPN. Ny fonctionnaire dia afaka maimaim-poana ary tsy misy dokam-barotra.
Download Kronos Firewall
Ho famintinana - ho an'ireo mpampiasa izay miahiahy momba ny fiarovana ny angon-drakitra, dia azo atao koa ny miaro ny fitaovana ampiasainy amin'ny rindrina afo. Ny safidy ny fangatahana ho an'ity tanjona ity dia tena lehibe - ankoatra ny firewall natokana ho an'ny sasany, ny sasany amin'ireo antivirus dia manana io asany io (ohatra, tranonkala finday avy amin'ny ESET na Kaspersky Labs).
Mifidy programa iray
Famerenana sy famerenana amin'ny laoniny
Dika mitovy dika mitovy 3.10.40
Mamaky ny Mpanjifa amin'ny Windows 10
Izahay dia manamboatra Yandex
Amin'ny fampiasana ny finday toy ny router Wi-Fi (Android, iPhone ary WP8)
Ahoana no hanaovana
Bref sy ny friezes
IOS sy MacOS
Screenshots and photos
Ny mpampiasa Canon PIXMA iP7240, toy ny iray hafa, dia mila ireo mpamily napetraka ao amin'ny rafitra mba hiasa tsara, raha tsy izany dia tsy mandeha ny anjara asa sasany. Misy fomba efatra hitadiavana sy hametrahana mpamily ho an'ny fitaovana atolotra. Mitady sy manamboatra mpamily ho an'ny printer Canon iP7240 isika. Ny fomba rehetra izay aseho etsy ambany dia mahomby amin'ny toe-javatra iray, ary misy fahasamihafana eo amin'izy ireo izay mahatonga azy ho mora ny mametraka rindrambaiko arakaraka ny filan'ny mpampiasa. Read More
Windows 10 Experience Index
Firy RAM mila anao amin'ny ordinatera?